သမီးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိတွေဝေနေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ဇနီးမောင်နှံ – Zeekwat Hot News
May 17, 201901355
သမီးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို ကြည့်ပြီး မကြာခင်မိဘများဖြစ်လာတော့မယ့် စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးက ကြည်နူးပီတိတွေဝေနေခဲ့ကြပါတယ်။ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ သမီးလေးကို အဖေတူသမီးလေးလို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
စန္ဒီမြင့်လွင်က “အဖေတူသမီးလေး နူတ်ခမ်းနှာခေါင်းတွေက😍
မျက်နှာကိုလက်နဲ့ ကွယ်လိုက်ခြေထောက်နဲ့ ကွယ်လိုက်နဲ့ မနည်းရိုက်ရတယ် စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရိုက်ပေးတဲ့ဆရာမကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
အပေါ်နူတ်ခမ်းကတော့အမေတူသလားလို့ 😍” ဆိုပြီး သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ကြည်နူးစွာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ ကိုယ်ဝန်က အခုဆိုရင် (၂၉) ပတ် ရှိနေပါပြီ။ ပထမဦးဆုံး ရင်သွေးလေးက စန္ဒီမြင့်လွင် လိုချင်နေတဲ့ သမီးလေး ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရမှန်း သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ အပျော်ကြီးပျော်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လိုချင်နေတဲ့ သမီးဦးလေးဖြစ်တာကြောင့်လည်း အစ်မဖြစ်သူ စိုးမြတ်နန္ဒာနဲ့ ညီမဖြစ်သူ စိုးပြည့်သဇင်တို့က ဂုဏ်ပြု Surprise တွေ လုပ်ပေးခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
သူမဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသီဟလွင်နဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှစ် မတ်လ (၄) ရက်နေ့က မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့မှာတော့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Source From Sandy Myint Lwin
သမီးလေးရဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျမြားကို ကွညျ့ပွီး မကွာခငျမိဘမြားဖွဈလာတော့မယျ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးက ကွညျနူးပီတိတှဝေနေခေဲ့ကွပါတယျ။ စန်ဒီမွငျ့လှငျကတော့ သမီးလေးကို အဖတေူသမီးလေးလို့ ကောကျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။စန်ဒီမွငျ့လှငျက “အဖတေူသမီးလေး နူတျခမျးနှာခေါငျးတှကေ😍မကျြနှာကိုလကျနဲ့ ကှယျလိုကျခွထေောကျနဲ့ ကှယျလိုကျနဲ့ မနညျးရိုကျရတယျ စိတျရှညျလကျရှညျရိုကျပေးတဲ့ဆရာမကိုကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျအပျေါနူတျခမျးကတော့အမတေူသလားလို့ 😍” ဆိုပွီး သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ကွညျနူးစှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။စန်ဒီမွငျ့လှငျရဲ့ ကိုယျဝနျက အခုဆိုရငျ (၂၉) ပတျ ရှိနပေါပွီ။ ပထမဦးဆုံး ရငျသှေးလေးက စန်ဒီမွငျ့လှငျ လိုခငျြနတေဲ့ သမီးလေး ကိုယျဝနျလှယျထားရမှနျး သိလိုကျရတဲ့ အခြိနျမှာ အပြျောကွီးပြျောနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ လိုခငျြနတေဲ့ သမီးဦးလေးဖွဈတာကွောငျ့လညျး အဈမဖွဈသူ စိုးမွတျနန်ဒာနဲ့ ညီမဖွဈသူ စိုးပွညျ့သဇငျတို့က ဂုဏျပွု Surprise တှေ လုပျပေးခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။သူမဟာ ခငျပှနျးဖွဈသူ ကိုသီဟလှငျနဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှဈ မတျလ (၄) ရကျနကေ့ မင်ျဂလာလကျမှတျရေးထိုးခဲ့တာဖွဈပွီး မတျလ (၁၁) ရကျနမှေ့ာတော့ မင်ျဂလာဧညျ့ခံပှဲ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။
ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ဆိုင်မှာ လှလှလေး ဓာတ်ဖမ်းခဲ့တဲ့ ဗိုက်ဗိုက်လေးနဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
Hey Buddy!, I found this information for you: "သမီးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိတွေဝေနေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ဇနီးမောင်နှံ". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/857. Thank you.